पाकिस्तानले नया राजनैतिक नक्सा जारी गर्यो,भारतले भन्यो यो बैधानिक हैन मुर्खता हो। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
पाकिस्तानले नया राजनैतिक नक्सा जारी गर्यो,भारतले भन्यो यो बैधानिक हैन मुर्खता हो।
रेडियो झापा 100.7 MHz. बुधबार, साउन २१, २०७७ ५:३९:१४
२१ साउन,इस्लामाबाद/पाकिस्तानले जम्मू कश्मीर, लद्दाख र जूनागढलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । पाकिस्तानी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रधानमन्त्री इमरान खानले मंगलबार जानकारी दिएका छन् ।